Umthandazo kuSan Martín de Porres. ? Yezilwanyana kunye nabaGulayo.
Umthandazo kuSanta Martin wasePortres, sisixhobo esinamandla ezandleni zabantu abagcina ukholo olomeleleyo nolusempilweni. I umthandazo San Martin de Porres Ifanekisela usindiso kwiimeko ezininzi zonyango kunye nokubandakanya abantu abanemibala.
Ngelixa wayesaphila, ibiluncedo kwabo babelaliswe esibhedlele ngeengxaki zempilo.
I-San Martín de Porres yeyona saint ethandwayo eMzantsi Melika ngenxa yemimangaliso emininzi eyenziwayo kuye kwakude kudala ngaphambi kokuba abethwe.
1 Umthandazo ku-Martin Martin de Porres Ngubani uMartin de Porres?
2 Umthandazo eSan Martín de Porres wezilwanyana
3 Umthandazo kuSan Martín de Porres wabagulayo
3.1 Ndingathandaza nini?
Umthandazo ku-Martin Martin de Porres Ngubani uMartin de Porres?
Uzalelwe eLima, I-Peru ngonyaka we-1579, ungoyena mdala kubantakwabo, utata wakhe wasePeru kunye nonina wayengumfazi wombala owazalelwa ePanama.
Xa akazange amkelwe lusapho lukatata, washiywa elugcinweni lukaNkosazana Isabel García, owayehlala eSan Lázaro, kwidolophu ehlala abantu abanemibala.
Kwasebusaneni waqala ukuqeqesha njenge-apothecary kwaye ukusuka apho waqala uqeqesho olukhulu el mundo Amayeza.
Waqala amalungiselelo akhe ezenkolo kwindawo yoonongendi yaseDominican iNenekazi lethu le Rosario kodwa wanqatshwa kakhulu ngenxa yelitha lemibala yolusu.
Nangona kunjalo, uMartin wahlala eqinile kwizenzo zakhe, waya emithandazweni kwangoko kwaye akazange akutyeshele nayiphi na imisebenzi yakhe, esiba ngumzekelo kwabanye.
Isipho sakhe sokuphilisa sabonwa ebantwini nasezilwanyaneni, zonke izigulana ezanyangwa nguMartin zafumana ukuphiliswa, kwiimeko ezininzi, ngoko nangoko.
Oku kwamenza ukuba azuze udumo kwaye sele sele abagulayo babefuna ukuphathwa nguye.
Kuyatshiwo ukuba, ngaphandle kwesipho sokuphilisa, abanye banikwa yena, njengesipho sokuthetha iilwimi, kwanangoko bephethe isipho sokubhabha.
Umthandazo eSan Martín de Porres wezilwanyana
Ndikusikelele, Thixo Somandla, mdali wezinto zonke eziphilayo.
Ngomhla wesihlanu nowesithandathu wokudala, wadala iintlanzi elwandle, iintaka emoyeni kunye nezilwanyana emhlabeni.
Uphefumlele iSan Martín de Porres ukuba ithathele ingqalelo zonke izilwanyana njengabantakwabo noodadewabo. Siyakucela ukuba usisikelele isilwanyana.
Ngamandla oThando lwakho, vumela [isilwanyana] ukuba siphile ngokomnqweno wakho.
Ndihlala ndinconywa ngenxa yobuhle bendalo yakho. Ungowokubongwa, Thixo Somandla, kuyo yonke indalo yakho!
Thandaza umthandazo kaMartin de Porres wezilwanyana ezinokholo.
Buza impilo yezilwanyana zasekhaya sisenzo sothando abantu abaninzi bacinga ukuba yinkcitho yexesha.
Izilwanyana ezifuywayo kunye nezo zikwimeko yesitrato, nokuba zizale ntoni na okanye zizilwanyana, nganye yazo inomncedisi eSan Martín de Porres onokuthi abanike impilo ukuze babe nobomi obusempilweni.
Umthandazo kuSan Martín de Porres wabagulayo
Othandekayo uSan Martin de Porres.
Kukhanya abathobekileyo, abangcwele bokholo olukhulu, kuwe owanikwa nguThixo ukuba enze imimangaliso engenakulinganiswa, namhlanje ndiza kuwe kule ntswelo kunye nosizi olundongamele.
Yiba ngumkhuseli wam kunye nogqirha wam, uMthetheleli wam kunye nomfundisi wam kwindlela yokuthanda uKrestu.
Wena ngenxa yokuthanda uThixo nabazalwana bakho, ubusoloko ungakhathali ukunceda abo basweleyo, kangangokuba oko kuyaziwa ukuba uThixo ukunike amandla okuba ngaxeshanye kwiindawo ezahlukeneyo, mamela ke abo bavuma ubuhle bakho, ngenxa yothando lukaKristu.
Ndiyathemba kumanyano lwakho olunamandla kunye noThixo ukuze, ndithandaze phambi kweNkosi, ukuba phambi kwemiphefumlo emsulwa njengawe konke ukulunga, izono zam zixolelwe kwaye ndiza kukhululeka kububi kunye nakwintlekele.
Ndifumanise umoya wakho wothando kunye nenkonzo ukuze ndikukhonze ngothando ukuba undinikele kubazalwana bam kwaye wenze okuhle.
Oko ndikufumanayo njengawe, njani, ukwenza izinto ezintle kwabanye, ukubandezeleka kwam kuyahlaziyeka.
Ngamana umzekelo wakho othobekileyo wokuba nawe, uhlala kwindawo yokugqibela, ungaba kukukhanya kum ukuze ndingaze ndilibale ukuthobeka.
Ngamana inkumbulo yokholo lwakho olukhulu, leyo inokwazi ukuphilisa, ukuvusa, kunye nokwenza imimangaliso emininzi kangaka, ibe yeyam ngamaxesha okuthandabuza, ubabalo oluzinzileyo oluzalisa iintliziyo zam ngomlilo woThando olungenamkhawulo lukaKristu.
Bawo waseZulwini, ngemfanelo yomkhonzi wakho othembekileyo uStart Martin, ndincede kwiingxaki zam kwaye ungavumeli ithemba lam lidideke.
Nkosi yethu Yesu Krestu, owathi "cela kwaye uyakufumana", ndiyakucela ngokuzithoba ukuba, ngokucela kuka-Martin Martin de Porres, uve esi sicelo.
Ndicela uthando, ndipe ubabalo endilucelayo ukuba luwenzela umphefumlo wam.
Ndicela oku ngoYesu Krestu, iNkosi yethu.
Lo mthandazo weSanta Martin de Porres ngabagulayo ngommangaliso!
Soloko usiya sisifo Yenye yezona nkqubo zinzima zokuba yonke into ephilayo yenzeke, ebantwini iyafana nokufa kuba izifo ezininzi azinakho ukunyangwa ngokwesayensi.
Nangona kunjalo, kukho isixhobo esinamandla lukholo olusebenza ngomthandazo.
Ungacela ukunyanga nasiphi na isifo ngalo lonke ixesha, abangcwele kwaye ngakumbi iSan Martín de Porres bazimisele ukusinceda basinike ukuphiliswa kwemizimba yethu okanye yelungu losapho okanye umhlobo ofuna umangaliso.
Imithandazo inokwenziwa ngawo onke amaxesha kungakhathaliseki indawo okanye imeko.
Abanye abantu bahlala benza isibingelelo sosapho apho baphakamisa khona imithandazo kusasa nangalo lonke usuku, iintsapho ezithandaza kunye zikhetha ukuzenza ngexesha lesidlo sakusasa, ngaloo ndlela ziqinisekisa ukuba usuku olukhuselekileyo nolukhuselekileyo.
Yenza izivakalisi ngovenvenas okanye uthandaze irosari ukugqibezela eSan Martín de Porres kunokuba ngumahluko wokubona ummangaliso ebomini bethu.
Kodwa konke oku kufuneka kwenziwe ngokukholelwa ukuba uyakuhlala esimamele ngamaxesha onke, ukuba akukhange kube kunjalo siya kuba sichitha ixesha kuba umthandazo ungaze ufike eluphahleni lwendlu.
Kusisixhobo esinamandla kodwa ukwazi ukuyisebenzisa kwaye ngaphezulu kwako konke, uhlala ukhumbula ukubulela ngommangaliso osinike wona.
Ndiyathemba ukuba uza kulufumana uncedo oludingayo ngomthandazo weSan Martin de Porres.
Umthandazo onamandla weSan Alejo